खगोल क्षेत्रमा लगातार फड्को मार्दै आएको चीनले चन्द्र सतहबाट अध्ययनका लागि ढुंगा तथा त्यहाँको धुलो ल्याउने भएको छ ।
चीनको रोबोटिक चाङ्ग–अ फाइभ अभियान अन्तर्गत चीनले सफलतापूर्वक अर्को अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमामा उतारेको छ।
उसको यानले गए राति चन्द्र सतहमा अवतण गरेको बिबिसीले जनाएको छ । चीनले यो अभियान अन्तर्गत पठाइएको यानले चन्द्रसतहबाट चट्टान तथा धुलो संकलन गरेर पृथ्वीमा फर्किने बताएको छ ।
उक्त यान चन्द्रमाको मन्स रुम्केर भनिने उच्च ज्वालामुखि क्षेत्रलाई निशानामा पारेको छ । चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेको अन्तरिक्ष यानको ल्यान्डर भनिने भागले त्यहाँ केही दिन वरपरको क्षेत्र अवलोकन गरेर अनि सामग्रीहरू संकलन गरेर बिताउनेछ।
ल्यान्डरमा क्यामेरा, स्पेक्ट्रोमिटर तथा रेडार जस्ता यन्त्र जडित छ। उसले भुइँबाट ढुंगा वा धूलो उठाएर करिब दुई किलो सामानलाई चन्द्रमाको कक्षमा घुमिरहेको असेन्डर भनिने यानमा पठाउनेछ जसले त्यसलाई पृथ्वीमा फर्काउनेछ।
यदि यो यान त्यहाँबाट आफ्नो काम सकेर फर्किन सफल भएमा सन् १९७० को दशकयताकै चन्द्रमा पुगेर फर्किएको यो पहिलो सफल चन्द्र अभियान हुनेछ । यसअघि यस्तो सफलता ४४ वर्षअगाडि प्राप्त भएको थियो जतिबेला सोभियत लुना ट्वेन्टी फोर अभियानले करिब दुई सय ग्राम सामान पृथ्वी ल्याएको थियो ।
यसै महिनाको अन्त्यतिर उक्त यान भित्री मंगोलिया क्षेत्रको घाँसे मैदानमा उत्रनेछ । यो अभियान सफल भए अन्तरिक्षको महाशक्तिको रूपमा बेइजीङ्को हैसियत बढ्नेछ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले चीनलाई बधाइ दिएको छ । नासाका वरिष्ठ अधिकारीले पृथ्वी ल्याइएका चन्द्रमाका सामग्रीको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने अवसर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मिल्ले आशा व्यक्त गरेका छन् ।
चीनले यसअघि दुईपटक चन्द्रमामा आफ्ना यानको सफल अवतरण गराइसकेको छ ( सन् २०१३ मा चाङ्गअ थ्री अनि गत वर्ष चाङ्ग–अ फोरसहित ।
के हुन् बाइडनका चुनौती ? कसरी पाउलान् पार ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र मुख्यमन्त्रीहरुले दोस्रो च...
अमेरिकाका सम्भावित रक्षामन्त्रीका नजरमा यस्ता छन् देश...